१३ वर्षमा माओवादी युद्धमा होमिएकी अरुणा यसरी बनिन् पत्रकार « Khasokhas Follow @khasokhasmag
१३ वर्षमा माओवादी युद्धमा होमिएकी अरुणा यसरी बनिन् पत्रकार
वि.सं. २०५३ मा १२ वर्षकी थिइन्, उनी। मुलुकमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध शुरू भएकाे एक वर्ष भएकाे थियाे। उनमा माअाेवादी जनयुद्धकाे राप र तापले त्यति बेलै छाेइसकेकाे थियाे।
‘हिजो जनयुद्धको आवश्यकता थियो। भयो पनि, र राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘अब युवा नेतृत्वमार्फत् मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिकाे अावश्यकता छ।’ उनी अहिले सशस्त्र जनयुद्धको सपना देख्दिनन्। बरू विकास र समृद्धिको सपना देख्छिन्।
सपना साकार गर्न अब राजनीतिक नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेकी रायमाझी भन्छिन्, ‘युवा पंक्ति टायर बाल्ने र आन्दोलनका निम्ति प्रयोग हुने होइन अब सृजनात्मक कार्यमा लाग्नुपर्छ, लगनशील हुनुपर्छ।
आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिका कुरा गर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको १० वर्षे जनयुद्धलाई सही ठान्छिन् उनी। ‘माओवादी जनयुद्धको बलमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट एकात्मक राज्यसत्ता मात्र ढलेन,’ उनी भन्छिन्, ‘मलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, जनताका छोराछाेरी मुलुकका राष्ट्रपति भए।’
पारिवारिक समस्याका कारण स्कूल परिवर्तन गर्नुपर्यो। एक वर्ष अर्घा रासीचौर माविमा पढेकी अरुणा एसएसली दिन शान्ति माविमै फर्किइन्। तर, एसएलसीताका तत्कालीन सरकारले उनलाई ‘नजरबन्द’ राख्यो।
घरदेखि टाढा भएकाले एसएलसी दिनका लागि होस्टलमा बस्नु पर्यो उनीलाई। प्रहरीले अरुणालाई बेलुका ५ बजेदेखि बिहानसम्म होस्टल बाहिर निस्किन निषेध गर्याे। ‘त्यतिबेला मलाई त नजरबन्दमा राखिएको रहेछ, अहिले पो थाहा पाइयो,’ विगत स्मरण गर्दै अरुणा भन्छिन्, ‘प्रहरीले यातना दिइरहन्थ्यो।’ त्यसपछि एसएलसी परीक्षा सकेर पार्टीको जिम्मेवारी पूरा गर्न उनी लागि गुल्मी हिँडिन्।
भारतमा करिब तीन वर्ष बसिन्, बाबुराम र हिसिलाको सचिवालयमा। बेलाबेला नेताहरूसँग नेपाल पनि फर्किन्थिन्। नेतृत्वहरू बैठकमा आउँदा उनी पनिसँगै आउँथिइन्। तत्कालीन सरकारसँग माओवादीले वार्ता गर्ने भयो।
‘उहाँको फोटो मात्र देखेको थिए। तर, गोरखपुरमा भेटेँ,’ उनले भनिन्। उनलाई डा. भट्टराईको सचिवालयमा काम गर्ने गरी पार्टीले पठाएको थियो। उनी भारत गएकी थिइन्। भारतमा करिब तीन वर्ष बसिन्, बाबुराम र हिसिलाको सचिवालयमा। बेलाबेला नेताहरूसँग नेपाल पनि फर्किन्थिन्। नेतृत्वहरू बैठकमा आउँदा उनी पनिसँगै आउँथिइन्। तत्कालीन सरकारसँग माओवादीले वार्ता गर्ने भयो।
वि.सं. २०५९ माघ १५ देखि २०६० भदौ १० सम्म सरकारसँग वार्ता भयो। यद्यपि, उक्त वार्ता असफल भयो। त्यो बेला माओवादी नेता डा.बाबुराम नेपाल फर्किएपछि अरुणा पनि आइन्। नेपाल पर्किएछि अरुणा २०६० मा गृहजिल्ला अर्घाखाँची लागिन्। ‘केन्द्रीय कार्यालय आफैमा केन्द्र थियो, तर, मलाई जनताको बीचमा काम गर्ने रहर जाग्यो, अनि सरुवा मागेर अर्घाखाँची गएँ,’ उनी सम्झिन्छिन्।
पम्फाले उनलाई रेडियोमा काम गर्ने प्रस्ताव राखिन्। त्यो बेलाको कुरा सम्झिँदै उनी भन्छिन्, ‘मलाई पत्रकार बनाउने माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भूषाल दिदी हो, मैले सोचेको पनि थिइन्, यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म काम गर्छु भनेर।’
तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा सञ्चारमाध्यम न्यून थिए। रेडियो नेपालमा सरकारको आधिकारीक सूचना सम्प्रेषण हुन्थ्याे भने निजीस्तरबाट सञ्चालित मिडियालाई ‘सेन्सरसीप’ लागेको थियो।
जीवन यात्रा हो। यात्राको क्रममा अनेकन आरोह-अवरोध आइरहन्छन्। रेडियो जनणतन्त्र नेपालमा कार्यरत रहँदा पार्टीकै प्रस्तावमा जनवादी विवाह गरिन्, राजेश चौधरीसँग। ‘हामीले जातीय र वर्गीय असमानताविरुद्ध अभियान थाल्यो, मुद्दा उठायौं, त्यही भएर पनि आफैबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अन्तरजातीय विवाह गरेकी थिए,’ उनी भन्छिन्।
रुकुमबाट दाङ एक महिने पैदल यात्रा। पेटमा ८ महिनाको शिशु। त्यो दिन सम्झिँदै अरुणा भन्छिन्, ‘बाटोमा कयौं ठाउँमा त बास नै पाइएन। तर, यतिसम्म भयो कि केही ठाउँमा खचाखच पाहुना (दशैंताका) भरिएका भएपनि हामीलाई बास दिए, नुन र पानीले सुनिएका हातखुट्टा गाउँका दिदीबहिनीले सेकिदिनुहुन्थ्याे।’
अरुणाका अनुसार जनयुद्धताका पार्टीका अधिकांश याेजना डा. बाबुराम भट्टरार्इ नै बनाउने गर्थे।प्रचण्डको हस्ताक्षरमा आउने विज्ञप्ती समेत बाबुरामले नै लेखेको स्मरण गर्छिन्, उनी। मिडियामा दिने अन्तरवार्ताका विषयमा पनि प्रचण्डले बाबुरामसँग सल्लाह गर्थे। ‘बाबुराम भट्टरार्इले राजनीतिमा झुट र षड्यन्त्र गर्न जान्नु भएन,’ उनले भनिन्।
अरुणा भने बाबुरामलाई ‘देशका लागि केही गरौं’ भन्ने भावना भएको र भिजन भएको नेताको रुपमा चिन्छिन्। ‘प्रचण्ड कला भएका नेता हुन् भने बाबुराम दुरदृष्टि राख्ने, देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने एजेण्डा र भिजन भएको अहिलेको नेपालको समकालीन राजनीतिवृतको सबैभन्दा सक्षम र इमानदार नेता भएको बाबुराम नै हाे,’ उनी दावीका साथ भनिन्।
गत वैशाख ३१ र असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारमा युवा पनि चुनिएका छन्। यो नेतृत्व विकास गर्ने मात्र होइन आगामी राजनीतिक यात्राको गन्तव्य तय गर्ने उद्गम स्थल पनि हो। ‘अहिलेका युवा जनप्रतिनिधिले आफूलाई परीक्षण गर्ने बेला आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो परीक्षामा पास भए आगामी गन्तव्यको यात्रा सहज हुन्छ।’
त्यसका संयोजक भट्टराई ‘अबको निकास आर्थिक विकास’ मात्र भनिरहेका छैनन्, ‘समतामूलक समृद्धि, समानुपाति-समावेशी-सभागितामूलक लोकतन्त्र, सुशासन-सदाचार र समुन्नत समाजवाद’ नयाँ शक्तिको प्रतिवद्धता हो।
‘राजनीति सेवा हो। तर, यहाँ पेशा बनाइएको छ। जसकारण नेताहरु रिटार्यड हुन चाहँदैनन्,’ अरुणा भन्छिन्, ‘३०औं वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेकाले अब विश्राम लिनुपर्छ। युवा सक्षम छ। अवसरको खाँचो छ।’ युवालाई समाज परिवर्तनको अस्त्रको रुपमा लिनुपर्ने उनको धारणा छ।